Page3of 3	41. APEC စည်းဝေးပွဲမှာ အိုဘားမား အမေရိကန်ဘက်က အာမခံပြောကြား	(2016)
အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမားဟာ သမ္မတရာထူး သက်တမ်းမကုန် ဆုံးခင် ပြည်ပနောက်ဆုံး ခရီးစဉ်အဖြစ်နဲ့ အာရှပစိဖိတ် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှု ထိပ်သီးညီလာခံ APEC ကို တက်ရောက်ဖို့ ပီရူးနိုင်ငံမြို့တော် Lima ...	Created on 19 November 2016	42. သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်	(2016)
နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၆ - သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည်ဆောက်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ဒုသမ္မတတွေကိုယ်တိုင် တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စီမံကိန်းအတွက် ပြီးစလွယ် ရွှေ ့ပြောင်းခံရတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့...	Created on 17 November 2016	43. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ကန်-အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီအဖွဲ့ တွေ့ဆုံ	(2016)
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဒီနေ့မနက်ပိုင်း ၁ဝးဝဝနာရီ အချိန်က နို်င်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဧည့်ခန်းမမှာ အမေရိကန်-အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံ ပါတယ် ...	Created on 16 November 2016	44. မြန်မာနဲ့ အမေရိကန် ဆက်ဆံမှု တိုးမြှင့်ရေး ဆွေးနွေး	(2016)
... နေပြည်တော်မှာ မနေ့က ကျင်းပပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ စီးပွားရေး... အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ရေးရာ ...	Created on 16 November 2016	45. Trump အစိုးရသစ်လက်ထက် အာရှစီးပွားရေး ပေါ်လစီ အလားအလာ	(2016)
"ကျနော်အစိုးရိမ်ဆုံးကတော့ Trump ရဲ့စီးပွားရေးအစီအစဉ်တွေမှာ အထူးသဖြင့် တရုတ်နဲ့ ကုန်သွယ်ရေးမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံ အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်တဲ့မူတွေ ထားမှာကိုပါ။ အဲဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ တရုတ်ကို ထိခိုက်မယ်ဆိုရင်....."Authors: ...	Created on 16 November 2016	46. ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ဇုန်တွေတိုင်းနဲ့ ပြည် နယ်အသီးသီးမှာ ခွဲဲခြားသတ်မှတ်	(2016)
... "ကျနော်တို့ အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့ ဒါကြီးကို ဇုန်သတ်မှတ်လို့ မဖြစ်ဘူး၊ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေ၊ ဒီအသံတွေကို နားထောင်ပြီး ညှိနှိုင်းတာပေါ့။ ကျနော်တို့ အစိုးရ ...	Created on 14 November 2016	47. Eleven Media အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နဲ့ အယ်ဒီတာချုပ်တို့ကို လွှတ်ပေးဖို့ ANN တောင်းဆို	(2016)
... Eleven သတင်းစာမှာ ဒေါ်လာတစ်သိန်းဝန်းကျင်တန်တဲ့ နာရီတစ်လုံးကို ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသွားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယော... Eleven Media အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးသန်းထွဋ်အောင်နဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် ...	Created on 13 November 2016	48. ဘိုးမင်းခေါင် ခြေရာကောက်သူ	(2016)
နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးဖက်ကို အာရုံစိုက်မှုများနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယဉ်ကျေးမှုပျောက်ကွယ်နိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေ တွေ့မြင်နေရတယ်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကလေးများကျောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့က မြန်မာမှုပညာဆရာ ဦးဝင်းထွဋ်ကျော်က ...	Created on 12 November 2016	49. ငရုတ်သီးမှုန့်နဲ့ အရောင်တင် မှုန့်တွေ ကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်း ရမည်	(2016)
... အားကစား ဝန်ကြီးဌာန အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ သန်းထွဋ် က ပြောပါတယ်။ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ အရောင်တင်မှုန့်တွေ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ...	Created on 12 November 2016	50. အောက်တိုုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ သတင်းပြင်ဆင်ချက်	(2016)
... ဘဏ္ဍာအခွန် စီမံကိန်းနဲ့ စီးပွားရေဝန်ကြီး ဦးဝေလင်းက အတည်ပြုပြောတာကို တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တရားမဝင် ကျောက်စိမ်း သယ်ယူမှုမှာ ပါဝင်တဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေကို အရေးယူမည် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်း တရုတ်-မြန်မာ ...	Created on 12 November 2016	StartPrev123NextEnd